I-Sony Xperia 1 izakwaziswa ngokusesikweni ehlotyeni | I-Androidsis
I-Sony Xperia 1 inomhla wokukhutshwa omtsha
Ukusukela ekunikezelweni kwayo ngokusemthethweni kwi-MWC 2019 edlulileyo, I-Sony Xperia 1 ivelise iindaba. Nangona ubukhulu becala kubangelwe kukulibaziseka ukufikelela kwimarike. Zininzi kakhulu iindaba malunga nokuqaliswa kwesi siphelo sophawu lwaseJapan, eyokugqibela kubo ibonakalisile oko bekuya kuba sentwasahlobo. Kodwa kubonakala ngathi Kuya kufuneka silinde iinyanga ezimbalwa ngaphezulu de ifike le modeli kwiivenkile.
Ubuncinci kwimeko ye-United StatesEyokuqala yentengiso enomhla wokusungulwa ngokusesikweni kwale Sony Xperia 1. Ubuncinci, sele sinokufumana umbono wokuba esi sixhobo siza kuphehlelelwa nini ngokusemthethweni. EYurophu awukabikho umhla othile wokumiliselwa.
Kwimeko ye-United States, Umhla wokukhutshwa kwale Sony Xperia 1 nguJulayi 12. Ke kufuneka silinde iinyanga ezimbini ezingaphezulu ukuba sisungulwe ngokusesikweni. Inkampani ngokwayo sele iqinisekisile ukumiliselwa kwayo elizweni. Ziyi-data esemthethweni ke ngoko.
Kubonakala ngathi, Kubekho iingxaki kwimveliso yesixhobo, ezibangele oku kulibaziseka ekusungulweni kwayo. Asazi kakuhle ukuba zeziphi iingxaki ehlangane nazo inkampani yaseJapan. Kodwa ubuncinci sinokuba nengcaciso yokuba kutheni kuthathe ixesha elide ukufika.
Ngethemba ukwaziswa kwayo eYurophu kuya kuba ehlotyeniUkuba eUnited States sele sinalo mhla phakathi kuJulayi. Kodwa okwangoku akukho siqinisekiso sisemthethweni. Akukho nto malunga nexabiso layo, nangona kule ngqondo kukho amarhe ambalwa kwaye sele kuqinisekisiwe ukuvuza ukuza kuthi ga ngoku.
Kuya kufuneka silinde kude kubekho idatha entsha malunga noku. Siyathemba ukuba asizukulinda ixesha elide ukuba sazi ukuba le Sony Xperia 1 iza kufika nini kwintengiso yaseYurophu. Uphawu lwaseJapan ludinga isiphelo salo sokuthengisa kakuhle, Ngokubona iziphumo zabo ezibi ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka. Ke le Sony Xperia 1 yenye yethemba lenkampani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Sony Xperia 1 inomhla wokukhutshwa omtsha
Ndiyigcinile i-Xperia 1 eAmazon eSpain kwaye indixelela ukuba ifika nge-5 kaJuni nge-6 ngexabiso le- $ 964,95, okwangoku ayindixeleli ukuba baya kunika nantoni na kodwa kuyarholwa ukuba nokuba sisixhobo sokudlala 4 okanye Isizukulwana sesithathu see-headphone ezingenazingcingo zakwaSony.
Lawula iqela lakho leFomula 1 kwi-freemium F1 Manager
I-Exynos 9609: iprosesa entsha ye-Samsung